on-line ezingatyiwa-mhlwa - China Langzhi Welding Equipment
Ubume Le nkqubo nokona, kunye ngomatshini pipe-wokwenza. Linokuthi ifaniswe ezininzi iintlobo uqwalaselo kuxhomekeke kuyimfuneko. P + Yinyaniso: Kuba shot ngenqindi, iplasma ziya kwamkelwa ukuba bottoming kuqatshelwa ukwenza umthungo welding ukuba omnye umlinganiselo umgca ngqo (Enye wadubula akwazi ukuwela 8mm okanye ukukhonya ipleyiti olulingana). Kuba shot yesibini, argon arc welding umatshini ziya kusetyenziselwa ukulungisa ukwenza kumphezulu kakuhle ngaphandle sidewall kungangabikho .. T + P + Yinyaniso: shot Owokuqala preheat kunye argon arc welding, s ...
Le nkqubo nokona, kunye ngomatshini-yokwenza umbhobho. Linokuthi ifaniswe ezininzi iintlobo uqwalaselo kuxhomekeke kuyimfuneko.
P + Yinyaniso: Kuba shot ngenqindi, iplasma ziya kwamkelwa ukuba bottoming kuqatshelwa ukwenza umthungo welding ukuba omnye umlinganiselo umgca ngqo (Enye wadubula akwazi ukuwela 8mm okanye ukukhonya ipleyiti olulingana). Kuba shot yesibini, argon arc welding umatshini ziya kusetyenziselwa ukulungisa ukwenza kumphezulu kakuhle ngaphandle kungangabikho sidewall ..
T + P + Yinyaniso: shot Owokuqala preheat kunye argon arc welding, shot yesibini kukuba ukusebenzisa plasma kubusa ukuwelda kunye shot wesithathu ukuba ukulungisa ngokusebenzisa argon arc welding, okanye ukudibanisa ekhoyo ukuwelda-wire ukwenza lwangaphandle iwelding komphetho module kumphezulu elihle . Le nkqubo efanelekileyo 1.8mm-12mm ubukhulu SS umgca kumbhobho kungamampunge.
T + T + Yinyaniso: Ngokwamkela iteknoloji pole iwelding Muti-negative, umisele 3 ukuwelda ibala ukuwelda umgca awokuvelisa, isantya iwelding iza kuphuculwa yi calories ayangenana. adubula Kuqala kufuneka umsebenzi arc-ujingi, oko ngempumelelo ukususa ioli kunye zamanyala pre-ubushushu umsebenzi-sifuba. Thumela shot ukuba iwelding kubusa kwaye shot wesithathu ukulungisa. Oku ngempumelelo ukuphepha ibangela ukuxubana / Pore / Isanti-umngxuma njl Yaziwa ngokubanzi usded kulo welding for ekufumaneni ukutya kwibakala sanitary ityhubhu / ityhubhu ubushushu-exchange / ityhubhu ekondensa ne Ti Tube
iwelding yamanje 0-500A
speed welding 0-3000mm / min
welding ubukhulu 2-12mm
: Previous ezigoba ibhodi welding
Yenza ingxubevange Steel Welding
Engayi Steel Welding
Stainless Pipe Welding Equipment